I-Airport Shuttle yeZurich neBasel - Okukhethekile futhi ekhululekile
Isikebhe sezindiza seZurich naseBasel
Fika ngokuphepha futhi ngezikhathi - nge-Premium Transfer Service yakho
Ingabe uhlela ukuhamba ngasese noma ebhizinisini futhi ungathanda ukuqinisekisa uhambo olushelelekile ne-shuttle yezindiza ezinokwethenjelwa ngaphambi kokuhamba?
Umshayeli wethu uzokuqoqa ngomunye wemikhiqizo yethu yasezingeni eliphezulu e-German esuka ekhaya, ehhovisi noma esangweni lesikhumulo sezindiza. Yebo sizokusiza ngomthwalo. Yiqiniso, kufanele indiza yakho ifike maduze, ngeke sikuvumele phansi kodwa ulinde ukufika kwakho.
Fika ukhululeke futhi ukhululekile endaweni oya kuyo
Abagibeli bethu abaningi basebenzisa insizakalo yokudlulisa isikhumulo sezindiza phakathi kweZurich Airport ne-Euro Airport Basel, njengoba uxhumano oluqondile lojantshi aluhambisani ngqo phakathi kwamaqembu amabili. Ukuze ulondoloze uhambo lwebhasi olungakhululekile noma uhambo oluthile lokuhamba ngetekisi, ukukhetha kwe-shuttle yethu yezindiza kuyisinqumo esifanele. Indawo yethu eBasel emgqeni wezintambo phakathi kweFrance, iSwitzerland neJalimane, singumlingani ofanele nawe uma ufuna emaphemeni ethu okukhethekile emakhilomitha angu-70 kude neFriburg noma uya ngqo eStuttgart noma eMunich.
I-Airport Shuttle Zurich neBasel - Ucingo: + 41 78 861 35 50
Always sedan kwesokudla ekuqaleni
Ingabe uhamba njengomuntu emhlanganweni webhizinisi obalulekile? Khona-ke ungaba nokuhamba okuthulile, ukufika okuthembekile ngesikhathi sokufika futhi, ngokuqinisekile, ukuhlakanipha kwethu kwe-100% ngesikhathi sezingcingo zakho zebhizinisi. Njengomndeni noma eqenjini unamaphemine amakhulu amakhulu anakho, lapho ungajabulela khona ukuhamba okunethezeka nge-shuttle yethu yezindiza ngokusebenzisa iSwitzerland yethu enhle. Ngaphezu kokuphepha nokugcina isikhathi, abashayeli bethu bazimisele ukwenza uhambo lwakho lujabulise ngangokunokwenzeka.
Ukubhuka kwezindiza zebhulabhu ku-inthanethi
Sicela usishiye ulwazi ngezinsuku zakho zokuhamba kithi ukuthintanaSizoxhumana nawe ngokushesha ngangokunokwenzeka ukuze uxoxe ngemininingwane. Ungasifinyelela ngocingo ku-41 78 861 35 50
Kubhalwe ku: Basel sezindiza Shuttle isevisi Limousine Zuerich
taxi.flughafen Januwari 23, 2017 Januwari 23, 2017 Ukukhangisa Awekho amazwana
← Ukudluliselwa kwezindiza eBasel - ukuhamba okunethezeka eSwitzerland
Isevisi yokudlulisa i-360 yehhotela e-Basel →